11 Waddnamha deggan Abyssinia
Dadka degen wadanka Itoobiya waxee ku hadlaan luqado gaaraayo 67 ilaa 79 luqadood oo kamidtahay afka soomaaliga.!!~?
Itoobiya waxaa laga caabudaa diimo aad u badan. 45% waa krishtaan, 51% neh, waa Muslimiin. 3,2 % neh waa diimo kale, oo laga caabudo.
Wadanka itoobiya wuxuu ka mid yahay wadamada Afrika cudarka HIV AIDS-ka saamayn aad u weyn ku yeeshay.
[Geeska Africa intee dhacdaaa Itobiya Fascinating Ethiopia].
Waddnamha deggan Abyssinia
United Kingdom 20,000+
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Itoobiya&oldid=235852"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 May 2022, marka ee eheed 07:55.